Goobaha cimilada ee Dunida | Saadaasha Shabakadda
Sawir ay ku kala duwan yihiin aagagga cimilada kala duwan, caddaanku waa aagga barafka, buluug aagga subpolar, lilac aagga tundra, cagaaran aagga qabow, huruudda aagga cimilada, iyo casaanka aagga kulaylaha.
Waxaan nasiib u leenahay inaan ku noolaano aduunyo ay ku noolyihiin noocyo badan oo noloshu. Xayawaanka iyo dhirta ku wada nool sida ugu fiican ee suurtogalka ah: is-dhammaystirid midba midka kale, in la is caawiyo - in kasta oo ku dhowaad aan la ogeyn - si qof walba, jaad ahaan, u sii jiro jiritaanka.
Waxaan ku leenahay noocyadan kala duwan meeraha laftiisa. Ahaanshaha qaab-dhismeedka loo yaqaan 'geoid', falaaraha qorraxda ayaan si siman u wada gaadhin dusha sare oo dhan, sidaa darteed xeeladaha la qabsashada ayaa u gaar ah noole kasta. Sababta Sababta aagagga cimilada ee Dunida waxay leeyihiin astaamo u gaar ah.
1 Saamaynta falaadhaha qorraxda ee dhulka
1.1 Dhaqdhaqaaqa dhulka
1.2 Sidee ayey falaadhaha qorraxdu u gaaraan Dhulka?
2 Aagagga cimilada
2.1 Aagga Kulaylka
2.2 Aaga subtropical
2.3 Aag ku meel gaadh ah
2.5 Aagga Tundra
2.6 Aagga qabow
Saamaynta falaadhaha qorraxda ee dhulka
Kahor intaanan u gudbin mawduuca gacanta lagu hayo, bal aan marka hore sharaxno saamaynta ay falaadhaha qoraxda ku leeyihiin meeraheenna, iyo sida ay ku yimaadaan
Dhulku waa meere dhagax ah oo sida aan ognahay ku socda dhaqdhaqaaq joogto ah. Laakiin had iyo jeer isku mid maahan, dhab ahaantii, afar nooc ayaa lagu gartaa:
Maalin kasta (ama, si ka sii saxan, 23 saacadood iyo 56 daqiiqo kasta) Dhulku wuxuu ku wareegaa meeriskiisa, jihada Galbeed-Bari. Waa tan aan inta badan ogaanno, maadaama farqiga u dhexeeya maalinba maalinta ka dambeysa uu aad u weyn yahay.
365 maalmood oo kasta, 5 saacadood iyo 57 daqiiqo, meerahu wuxuu ku wareegaa qorraxda hal kacaan.Hase yeeshe, mudadaas waxaa jira 4 maalmood oo aad u qaas ah:
Maarso 21st: waa guga u dhiganta guga waqooyiga, iyo dayrta uumiga xaga koonfureed.
22 ee Juun: Waa xagaaga xagaaga waqooyiga, iyo xilliga qaboobaha koonfurta. Maanta dhulku wuxuu gaari doonaa masaafada ugu badan ee uu ka joogo qorraxda, waana sababta loogu yaqaan 'aphelion'.
September 23: waa dayrta uumiga ah ee cirifka woqooyi, iyo guga equinox ee koonfuurta koonfureed.
Diisambar 22th: Waa xilligii jiilaalka xaga waqooyi, iyo xagaaga xaga koonfureed. Maanta dhulku wuxuu gaari doonaa sida ugu dhow ee uu ugu dhow yahay boqorka xiddigtiisa, waana sababtaas tan loo yaqaan 'perihelion'.
Meeraha aan ku nool nahay waa ellipsoid leh qaab aan caadi ahayn oo ay qaabeysan tahay soo jiidashada cufnaanta boqorka xiddigga, dayaxa iyo, sidoo kale in kastoo in ka yar, meerayaasha. Tani waxay keentaa qulqulaya dhidibkiisa si tartiib tartiib ah, ugu dhowaad aan la dareemi karin, inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa tarjumaadda loo yaqaan »precession of the equinoxes». Iyaga awgood, mowqifka cirifka cirka ayaa isbedelaya qarniyo badan.
Waa gadaal iyo gadaal u socodka dhidibka Dunida. Maaddaama aysan ahayn mid goos goos ah, soo jiidashada Dayaxa ee ku soo qulqulaya dhul gariirka ayaa sababa dhaqdhaqaaqan.
Sidee ayey falaadhaha qorraxdu u gaaraan Dhulka?
Maaddaama meeraha uu ka ballaadhan yahay oo ka yar yahay isla markaana tixgelinayo dhaqdhaqaaqa ay sameyneyso maalmaha iyo bilaha oo dhan, falaadhaha qorraxda kuma gaadhayaan dhammaan qaybaha adduunka awood isku mid ah. Xaqiiqdii, hadba inta aaggu ka soo jeedo boqorka xiddigga, oo marba marka aad u dhowdahay tiirarka Dunida, ayay fallaadhadu yaraan doonaan. Waxay kuxirantahay, aagaga kaladuwan ee cimilada ayaa asal ah.
Cimilada waxaa lagu go'aamiyaa xuduudaha cimilada sida heerkulka, huurka, cadaadiska, dabaysha, iyo roobka. Haddii aan tixgelinno kaliya heerkulka, aagagga la qeexay waxaa lagu helaa iyadoo loo eegayo nidaamyada kala soocidda ee kala duwan. Tusaale ahaan, nidaamka Köppen lix aag cimilo ayaa lagu kala saaraa iyadoo kuxiran heerkulka xilli ciyaareed kasta:
Meelahaasi waxay leeyihiin a cimilada kulaylaha, kaas oo laga helo aagga isku-celiska ah 25 from latitude woqooyi ilaa 25º latitude koonfureed. Celceliska heerkulka ayaa mar walba ka sarreeya 18ºC. Taas macnaheedu maaha in dhaxan aysan dhici karin, maxaa yeelay waxay ku dhacaan buuraha dhaadheer mararka qaarkoodna lama degaanka; si kastaba ha noqotee, heerkulka celceliska ayaa sarreeya.
Cimiladan Waxay u sabab tahay xagasha dhacdooyinka shucaaca qoraxda ee ka dhaca gobolladan. Waxay ku dhowaadaan dhinac ahaan, taas oo keenta in heer kulka uu sarreeyo iyo kala duwanaanshaha diurnal sidoo kale waa mid aad u sarreeya. Intaas waxaa sii dheer, waa in la sheegaa in dhulbaraha uu yahay meesha ay dabaysha qabow ee ka socota hal dhinac ka soo baxda kula kulmaan dabaylaha diirran ee ka kale, taas oo soo saarta xaalad cadaadis hoose oo joogto ah oo loo yaqaan aagga isku-xirnaanta isdhexgalka, si markaas ay u da'ayaan roobab joogto ah in badan oo waqtiga ah. sanadka.
Tenerife (Jasiiradaha Canary, Spain)
Meelahan waxay leeyihiin cimilo-hoosaadyo, oo laga helo aagagga u dhow Tropics of Cancer iyo Capricorn, meelaha sida New Orleans, Hong Kong, Seville, Sao Paulo, Montevideo, ama the Canary Islands (Spain).
Celceliska heerkulka sanadlaha ayaan hoos uga dhicin 18ºC, celceliska heerkulka bisha ugu qabow sanadka waa inta udhaxeysa 18 iyo 6ºC. Dhaxan dhaxaad qafiif ah ayaa dhici kara, laakiin kani maahan kii caadiga ahaa.
Aag ku meel gaadh ah
Aaggan wuxuu leeyahay cimilo dhexdhexaad ah, oo laga helo aagagga sare oo heerkulkoodu ka qabow yahay meelaha hoose ee isla loolka ah. Celceliska heerkulka ayaa ka sarreeya 10ºC bilaha ugu kulul, iyo inta u dhexeysa -3º iyo 18ºC bilaha qabow.
Waxaa jira afar xilli oo si wanaagsan loo qeexay: guga oo leh heerkulbeegyo kordha markay maalmuhu socdaan, xagaaga oo leh heerkul aad u sarreeya, dayrta oo heerkulkeedu hoos u dhaco marka ay maalmaha marayaan, iyo xilliga qaboobaha oo dhaxan ka dhici karto
Aaggan wuxuu leeyahay cimilo subpolar ah, oo loo yaqaan 'subarctic' ama 'subpolar'. Waxaa laga helaa inta udhaxeysa 50º iyo 70º latitude, sida inbadan oo ka mid ah Siberia, waqooyiga Shiinaha, inta badan Kanada, ama inta badan Hokkaido (Japan).
Heerkulka ayaa hoos u dhigi kara -40ºC iyo xilliga kuleylaha, oo ah xilli soconaya 1 illaa 3 bilood, oo ka badan 30ºC.. Celceliska heerkulka waa 10ºC.
Cagaarka caarada ee Alaska.
Aaggan wuxuu leeyahay cimilo tundra ah ama cimilo buuraley ah. Waxaa laga helaa Siberia, Alaska, waqooyiga Canada, koonfurta Greenland, xeebta Arctic ee Yurub, koonfurta aadka u daran ee Chile iyo Argentina, iyo meelaha qaar ee waqooyiga Antarctica.
Haddii aan ka hadalno heerkulka, celceliska ugu yar ee jiilaalka waa -15 ,C, inta lagu guda jiro xagaaga gaaban way kala duwanaan karaan 0 ilaa 15 XNUMXC.
Aaggan wuxuu leeyahay a cimilada barafka leh, waxaana laga helaa Arctic iyo Antarctica. Cimilada goobahan waa mid aad u qabow, gaar ahaan Antarctica halkaas oo heerkulkeedu yahay -93,2ºC lagu diiwaan geliyey tan iyo markii falaadhaha cadceedu ku yimaadaan xoog aad u yar.
Taasna waan ku qabannay. Waxaan rajeyneynaa inay dan kuu aheyd. 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Meelaha Cimilada ee Dunida